Fifidianana filoham-pirenena Hahazo ny anjarany izay kandida manirikiry ny HVM
José Michel Andrianoelison “Mila mpitondra mihaino ny vahoana isika”
Kandidà faha-20 nametraka ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiny, omaly tetsy amin`ny HCC Ambohidahy i José Michel Andrianoelison na « José kely ».
Kandida Tabera Randriamanantsoa Hiady amin’ny fianakaviambe iraisampirenena
Nanasa ireo mpiara-dia aminy rehetra eo anivon’ny fivoizana ny atao hoe fanorenana ifotony tetsy amin’ny Pave Antaninarenina omaly ny komitin’ny fampihavanam-pirenena na ny CRN sy ny antoko Kintana tarihin’ny filohany Tabera Randriamanantsoa.
Antoko HVM Mitady hijapy ny “Voromahery” fotsiny ?
Nanaitra ny nitsanganan’ny vovonana politika “Voromahery” izay vondrona miaro sy manohana an’i Hery Rajaonarimampianina amin’ny fifidianana.
Didier Ratsiraka Hapetraka anio ny taratasy filatsahan-kofidiany…
Efa ho herinandro izao no nifamoivoy ny vaovao fa ho anisan’ireo kandida filoham-pirenena ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka izay efa mananika ny faha 82 taonany amin’izao fotoana.
Marc Ravalomanana Hamory vahoaka eny Mahamasina
Taorian'ny fahatontosana ny fandrotsahana ny dosie filatsahan-kofidiana teny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny sabotsy 18 aogositra teo sy ny fanambarana ofisialy ny fahavitan’izany tany Toamasina
Kandida Dadafara Namaky bantsilana ny teti-dratsin-dRajoelina
Nametraka ny taratasy filatsahan-kofidiany ho filoha teny amin’ny HCC Ambohidahy omaly i Dadafara na Joseph Martin Randriamampionona,
Radavidson Andriamparany Tsy nampoizina ny maha kandida azy
Somary nanaitra ny fahitana an-dRadavidson Benjamin Andriamparany tetsy amin’ny HCC Ambohidahy omaly nanatitra ny taratasy filatsahan-kofidiany ho filoha satria tsy anisan’ireo nanao fanambarana ampahibemaso.
Sahirana amin’i Marc Ravalomanana ny fanjakana HVM, ary efa manangam-bovona amin’i Andry Rajoelina satria matahotra mafy ny ho resy amin’ny fifidianana. Tsy ireo ihany anefa no ho kandida mety hanana ny tanjany eo, fa efa manangasanga any ihany koa ny hafa.
Re koa fa hipoitra tsy ho ela i Orlando Robimanana, izay malaza ho kandida matanjaka ara-bola sy efa niomana fatratra na dia tsy misehoseho aza. Efa misy ny fivoriana sy fikaonan-doha ataon’ny herivelona politika sasany, toy ny vondrona ARMADA, ahitana an-dry Hajo Andrianainarivelo, Camille Vitale, Jean Louis Robinson,... izay mikatsaka fatratra izay kandida hotohanany sy azony antoka. Ekena fa mpikambana ao anatin’io ny MAPAR tarihin-dRajoelina, saingy maro amin’ireo mpikambana no efa nanana olana taminy, ary efa nisafidy ny nandeha irery tamin’ny 2013. Re siosio, fa mety hiantefa any amin’i Orlando Robimanana izy ireo satria sokajiana ho manana ny ampy izy raha ny resaka ara-bola. Hitombo izany ny olona atahorana amin’ny fifidianana, kanefa raha ny kajikajy amin’izao fotoana izao dia any amin’ny laharana faha-4 na faha-5 i Hery Rajaonarimampianina amin’ny fifidianana raha mandeha amin’ny mangarahara sy tena madio tokoa. Izay hipoitra eo ve izany, dia hilam-baniny sy handefasana Emmoreg na hamoronana dosie maloto avokoa ? Rehefa zohiana sy halalinina, dia mikendry ny hisian’ny korontana. Tiana hapetraka eto ny hoe raha maty aho matesa rahavana, ka aleo aloha mifamango ihany fa tsy hisy hanaiky resy tsy miady izany eto. Raha sanatria hosakanana aza anefa izay kandida atahorany eo, dia tsy maintsy hanao izay tsy hampandany azy. Eny fa hatramin’ny vahoaka aza hanohana kandida heveriny fa haharesy ny HVM amin’ny alalan’ilay hoe: “vote sanction”. Ekena fa hanatosaka volabe, saingy mety ho vola hariam-potsiny satria mba efa miomana amin’izany ihany koa ny hafa.